लाखौ आम्दानी दिने,के हो यो कालो कुखुरा?(पूरा जानकारि)
हिन्दी भाषामा एउटा उखान छ ‘सोने का अंडा देने वाली मुर्गीु । तपाईले कडकनाथ एक दुर्लभ प्रजातिको कुखुराको बारेमा त सुन्न भएकै होला । यो कुखुराको अण्डा र मासुको व्यापारले कृषकहरुले मासिक रुपमा लाखौं कमाइरहेका छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार १ हजार कडकनाथबाट केही दिनमै दश लाखसम्म कमाई हुन्छ ।
भारतमा हजारौं किसान यसको कारोबार गरिरहेको बताएको छ । बिगतमा रसवरीको पेटेन्ट राइटलाई लिएर उडिसा र पश्चिम बंगालबीच बर्षौं विवाद भएको थियो । त्यसैगरी कडकनाथ कालो कुखुराको लागि पनि भारतको मध्यप्रदेश र छत्तिसगढको सरकार अपसमा लडिरहेका छन् । कडकनाथको अण्डा एउटाको भारतीय रुपैयाँ ७० पर्छ भने एक किलो यसको मासु ९ सय रुपैयाँ पर्दछ । एक कम्पनी र केही किसान यसको व्यवसायिक पालन तर्फ आकर्षित भएका छन् ।
किन आकर्षित हुदैछन कडकनाथप्रति मानिस ? : कडकनाथ आफ्नो स्वाद र औषधीय गुणका लागि लोकप्रिय छ । यसको रगत, मासु र शरीर कालो रंगको हुन्छ । अन्य कुखुराको तुलनामा यसको मासुमा प्रोटिन धेरै मात्रामा हुन्छ र कोलेस्ट्रोल धेरै कम हुन्छ ।
१८ किसिमका आवश्यक एमिनो एसिड यसको मासुमा पाइन्छ भने बी-1, बी-2, बी-6, बी-12, सी र ई को मात्रा धेरै पाइन्छ । यसको मासु नर्भस डिअड’रको उपचारका लागि पनि प्रयोगमा ल्याइन्छ । यसको र’ग’तबाट धेरै प्रकारका बिरामीको उपाचार गरिन्छ ।
त्यसपछि चेन्नई जीआई ट्याग रजिष्ट्री कार्यालयले यस आवेदनलाई स्वीकार्दै कडकनाथको मासुमा मध्यप्रदेशको दाबीमाथि आपत्ति कसैको छ छैन भनेर नोटिस जारी ग”र्यो । यसपछि एक निजी कम्पनीको सहयोगमा छत्तिसगढको दन्तेवाडा जिल्ला प्रशासनले पनि आमनफाननमा कडकनाथमो मासुमा आफ्नो दा”बी पेस गरेको थियो ।
श्रीमान् भन्दा जेठी ५ नेपाली नायिका (फोटो फिचर)
आयल निगम भन्छ: पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्न सक्छ।